China Tablet PC Turnkey PCB Magetsi Assembly Kugadzira uye Fekitori | KAISHENG pcb
PCBFuture yave yakabatanidzwa pcb kugadzira. Kwemakore, isu tanga tiri mutengi centric uye tinunure mhando yepamusoro multilayer yakakwira-inomhanya pcb magadzirirwo, tichifunga nezve chaicho-chenyika kugadzirwa uye bvunzo zvinodiwa.
Akaturikidzana 8 rukoko pcb
Base Material: Yakakwirira Tg 170 FR-4
Midziyo Yesimbi: HASL Tungamira mahara Mamiriro Ekugadzira: SMT + Germinales: 8 rukoko pcb
Chinyorwa Chekutanga: Yakakwira Tg 170 FR-4 Certification: SGS, ISO, RoHS MOQ: Kwete MOQ
Solder Mhando: RoHS Inoenderana Imwe-Stop Services: Pcb Kugadzira Uye Turnkey pcb Assembly Kuedzwa: 100% AOI / X-ray / Visual Test
Keywords: Pcb Assembly, pcb nhema, Zvinodiwa, Pcb Assembly Vagadziri, Yakachipa pcb Assembly, Yakadhindwa Circuit Board Assembly Makambani
PaPCBFuture, tinoedza kushanda takabatana pamwe nevatengi vedu. Kubva pakuratidzira kusvika kuzere-kugadzirwa, isu tiri kuwedzera kwevatengi kugona. Isu tiri kugara tichivandudza mapurogiramu edu ehunhu uye maitiro ekusangana kana kupfuudza zvinodiwa nevatengi vedu pane zvinoenderera.
PCBFuture yakazvipira kuita yehunhu manejimendi sisitimu kuitira kuti zvigadzirwa uye masevhisi agare achizadzisa zvinodiwa nevatengi vedu.
Nei yedu pcb Assembly uye pcb yekugadzira sevhisi?
Yedu yemhando mutemo ndeyokupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye masevhisi kusangana nezvinodiwa nevatengi uye zvinotarisirwa neMutengo, Hunhu, Kuendesa panguva uye Service.
Isu tinotsigira maawa makumi maviri nemaviri online quote uye nekukurumidza 12-awa sevhisi yePCB prototype Specializing ari kugadzirwa chete-mativi pcb, miviri mativi pcb, multilayer pcb, aruminiyamu pcb uye kusanduka pcb.
Isu takazvipira kusangana nezvinodiwa nevatengi vedu kubva kumaindasitiri akasiyana murefu yemhando, kuendesa, kudhura-kushanda uye pcb mhinduro. Ipa zvakare yakasarudzika sevhisi sevhisi. Chekupedzisira, PCBFuture gadzirisa pcb maererano nebhajeti yako kuchengetedza nguva yako kuhwina musika.
kaviri mativi pcb
Quick dzokai pcb gungano
Low vhoriyamu pcb gungano
Mafomu eakadhindwa Circuit Mabhodhi:
1. Lighting Zvishandiso
Ma LED ane aluminium-based PCB anodiwa kwazvo kune akati wandei ekunyorera nemaindasitiri.
2. Zvemagetsi Zvevatengi
Zvemagetsi zvemutengi ndizvo zvishandiso zvatinoshandisa mazuva ese, senge mafoni kana makomputa. Kunyangwe iwo matsva mhando dzemafiriji anowanzo sanganisira zvemagetsi zvigadzirwa.
3. Mishonga yekurapa
Zvekushandisa zvekurapa, pasuru diki inodiwa kuzadzisa saizi inodikanwa yekuisirwa kana yekukurumidza imba yekutarisa. Naizvozvo, yekurapa pcb inowanzo kuve yakasarudzika yakakwira-kuwanda yekubatanidza PCBs, inonziwo HDI PCBs. Medical PCB inogonawo kugadzirwa ine inochinjika base zvigadzirwa, ichibvumira pcb kuti ichinje panguva yekushandisa, izvo zvakakosha kune ese emukati nekunze ekurapa michina.
4. Maindasitiri Mapepa
5. Zvishandiso ZveMotokari
6. MaAerospace Zvishandiso
Chengetedzo yekugadzirwa kweiyo yepamusoro-frequency wedunhu mabhodhi:
1. Iyo impedance yekudzvinyirira yakasimba, iyo inoenderana mutsetse upamhi kudzora yakanyanya kuomarara, uye kwese kushivirira ndeye 2%.
2. Nekuda kwekushandiswa kwemahwendefa akakosha, kunamatidzwa kwePTH dhipoziti yemhangura haina kukwirira. Kazhinji, michina yekurapa yeplasma inodikanwa kumisikidza iwo maburi uye nepamusoro kuwedzera kusungirirwa kwePTH mhangura uye solder mask ink.
3. Usakure ndiro usati watoreswa nemishonga, zvikasadaro iyo yekunamatira ichave yakashata kwazvo, uye inogona kungoomeswa neiyo micro-inoparadza hupfu.
4. Mazhinji emashizha acho zvinhu zvePTFE. Kuchave neanove makobvu mativi kana iwo akaumbwa neakajairika azvikuya cutters, ayo anoda akakosha azvikuya cutters.
5. Iyo yakakwira frequency frequency bhodhi iri yakakosha redunhu bhodhi ine yakakwira magetsi emagetsi frequency. Kazhinji kutaura, yakakwira frequency inogona kutsanangurwa seyakawandisa pamusoro pe1 GHz.
Masimba ayo epanyama, kunyatsoita uye nehunyanzvi ma parameter anodawo kwazvo. Iyo inowanzo shandiswa mumotokari anti-kudhumhana system, satellite system, redhiyo system uye mamwe minda.
Pashure: Smart TV Bhokisi pcb Assembly Main
Zvadaro: Turnkey Yakachipa pcb Assembly
Yemagetsi Pcb Gungano
Pcb Magetsi Assembly
Yakadhindwa Wiring Assembly